Joe Biden oo Gabar Madow ah u magacaabay Safiirka Mareykanka ee Qaramada Midoobey | Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Dowladda Soomaaliya oo sameysay Hay’adda Naafada Qaranka
DF oo cambaareysay qaraxyo ka dhacay Ciraaq
UK: “waqtiga wuu ka dhamaanayaa dowladda Soomaaliya waa in ay la heshiisaa mucaaradka doorashana qabataa”
Puntland oo dambi ka dhigtay in Ganacsatada Shilin Soomaaliga la safraan
Dowladda Itoobiya oo ka hadashay wararka sheegaya in Ciidamo Soomaali ah ka qeybgaleen dagaalkii Tigreey
Taliyayaal iyo Askar loo xiray dilkii Guddoomiye Dhagajuun
Joe Biden oo qaaday xayiraaddii uu Trump saaray Muslimiinta
Home/Somali News/Joe Biden oo Gabar Madow ah u magacaabay Safiirka Mareykanka ee Qaramada Midoobey
Joe Biden oo Gabar Madow ah u magacaabay Safiirka Mareykanka ee Qaramada Midoobey
Madaxwaynaha la doortay ee Mareykanka, Jeo Biden, wuxuu billaabay inuu soo dhiso xukuummaddiisa, si ay shaqada u bilowdo marka uu xilka la wareego, waxaana ka soo muuqanaya wajiyo horey ula soo shaqeeyay maamulkii madaxwayne Obama.
Madaxwaynaha Mareykanka, Jeo Biden ayaa Linda Thomas-Greenfield, oo horey u ahaan jirtay Kaaliyaha Xoghayaha arrimaha dibadda ee Afrika, ayaa loo magacaabayo safiirka Mareykanka ee Qaramada Midoobay.
Haweeneydan ayaa Soomaaliya booqatay bishii December ee sannadkii 2013-kii, xilligaas oo ay la kulamtay wasiirkii Arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo madaxweynihii xilligaas, Xasan Sheekh Maxamuud.
Sidoo kale, waxay ka mid ahayd wafdi uu hoggaaminayay Xoghayihii arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo Muqdisho tagay bartamihii sannadkii 2015-kii.
Waxay xilligaa la kulmeen Madaxweynihii hore, Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxdii maamul goboleedyada. Waxaa kullankaas ku wehliyay Ra’iisul Wasaarihii xilligaa Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo ururada bulshada rayidka ah.
Linda Thomas-Greenfield waa dublamaasi Mareykan ah oo ka soo jeeda Gobolka Louisiana, waxay dhalatay 1952, waxayna wax ka baratay Jaamacadda Louisiana State, halkaasi oo shahaadada kobaad iyo tan labaad-ba ay ka qaadatay.
Linda Thomas-Greenfield Sanaddii 1975, waxay shahaadada Mastarka ka diyaarisay maadada Maamulka iyo Maareynta Jaamacadda Wisconsin, halkaasi oo sidoo kale markii dambe ay ka qaadatay shahaadada PhD, waxay muddo 35 sano ka soo shaqeynaysay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
2013 illaa 2017, waxay ahayd qofkii Arrimaha Afrika u qaabilsanaa Xoghayaha Arrimaha dibadda ee Mareykanka, waxayna xilka ka degtay markii Trump la doortay.
Sidoo kale, 2012-kii illaa 2013, waxay ahayd Agaasimihii Guud ee xafiiska howlaha dibadda ee Mareykanka.. Waxay soo qabatay xilal kale oo safiirnimo ay ka mid tahay. Wadamada ay sida gaarka ah uga shaqeysay waxaa ka mid ah Liberia.
Xilligii maamulkii madaxwayne Obama Greenfield waxay ahayd ku xigeenka xoghayaha arrimaha Afrika u qabilsan dowoladda Mareykanka.
Waxay sidoo kale mar soo qabatAy xilka Agaasimaha Guud ee Wasaarada Arrimaha Dibadda, Thomas-Greenfield ayaa dhanka kale waxay mar ahayd safiirkii Mareykanka ee dalka Liberia, waalidinteeda ayaa la sheegay in dhanka waxbarshada aysan heer sare ka gaarin.
Lafta Gareen oo si kulul ula hadlay Musharrixiinta ku shirsan Muqdisho
Rooble oo kulan sagootin ahaa loogu saameeyay Baydhaba
Maxaa looga hadlayaa Shirka Guddiga joogtada ah ee Golaha Shacabka ee ka furmay Villa Hargeysa?
4- Xaqiiqo, oo Xasan Cali Khayre uu ka aamminsanyahay dhallinyarada.
Q.M oo sheegtay in Soomaaliya ay amaankeeda la wareegeyso sanadka soo socda
Laftagareen oo la kulmay mas’uuliyin ka socotay wasaaradda Qorsheynta DF
Wasiir Beyle oo beeniyay hadal dhawaan ka soo baxar RW Kheyre